Iindaba -Ungayenza njani ukuba inkampani yakho iphuhle ngokuthe chu kukhuphiswano oluphezulu ezilishumi
Ukuze nayiphi na inkampani ikhule ngokuzinzileyo nangokuzinzileyo, kufuneka ihlakulele ukhuphiswano lwayo oluphambili.
Olona khuphiswano luphambili lweshishini ekuqaleni lubonakaliswe kubuchule obuthile, ukhuphiswano oluphambili lweshishini lunokubola lube yimixholo elishumi ngokusekwe kuhlalutyo lokubonakaliswa kwalo, okubizwa ngokuba kukhuphiswano oluphezulu ezilishumi.
(1) Ukhuphiswano lokwenza izigqibo.
Olu hlobo lokukhuphisana sisakhono seshishini sokuchonga imigibe yophuhliso kunye namathuba entengiso, kunye nokuphendula kutshintsho lokusingqongileyo ngexesha elifanelekileyo nangendlela efanelekileyo. Ngaphandle kokhuphiswano, ukhuphiswano olusisiseko luya kuba yinto enesidumbu. Ukhuphiswano lokwenza izigqibo kunye namandla okwenza izigqibo ngokudibeneyo enza kubudlelwane obufanayo.
(2) Ukhuphiswano lombutho.
Ukhuphiswano lwentengiso lweshishini kufuneka ekugqibeleni lwenziwe ngemibutho yeshishini. Kuphela kuqinisekisiwe ukuba ukufezekiswa kweenjongo zeshishini kugqityiwe, abantu benza yonke into, kwaye bayayazi imigangatho yokwenza kakuhle, apho izibonelelo eziza kwenziwa kukhuphiswano lokuthatha izigqibo zingasileli. Ngaphaya koko, amandla okwenza izigqibo kunye nokuphunyezwa kwamandla kwamashishini nawo asekwe kuwo.
(3) Ukhuphiswano lwabasebenzi.
Umntu othile kufuneka anyamekele imicimbi emikhulu nencinci yombutho weshishini. Kuphela kuxa abasebenzi bekwazi ngokwaneleyo, bekulungele ukwenza umsebenzi olungileyo, kwaye benomonde nokuzincama, apho banokwenza konke.
(4) Inkqubo yokhuphiswano.
Inkqubo sisiphumo seendlela ezizodwa zokwenza izinto kwimibutho eyahlukeneyo nakwindima yenkampani. Ithintela ngokuthe ngqo ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza kwenkqubo yeshishini.
(5) Ukhuphiswano lwenkcubeko.
Ukhuphiswano lwenkcubeko ngamandla okudibanisa aqukethe amaxabiso aqhelekileyo, iindlela eziqhelekileyo zokucinga kunye neendlela eziqhelekileyo zokwenza izinto. Idlala ngokuthe ngqo indima yokulungelelanisa ukusebenza kweshishini kunye nokudibanisa izixhobo zalo zangaphakathi nezangaphandle.
(6) Ukhuphiswano lweBrand.
Iimpawu kufuneka zisekwe kumgangatho, kodwa umgangatho uwodwa awunako ukwenza uphawu. Ibonakalisa inkcubeko yomanyano olomeleleyo ezingqondweni zoluntu. Ke ngoko, ikwenza ngokuthe ngqo ukubanakho kweshishini ukudibanisa izixhobo zangaphakathi nezangaphandle.
(7) Ukhuphiswano lweshaneli.
Ukuba ishishini lifuna ukwenza imali, lenze inzuzo kwaye liphuhlise, kufuneka libe nabathengi abaneleyo ukuba bazamkele iimveliso kunye neenkonzo zalo.
(8) Ukhuphiswano lwamaxabiso.
Ixabiso eliphantsi lelinye lamaxabiso asibhozo ​​abafuna abathengi, kwaye akukho bathengi banikelayo'Khathalela ixabiso. Xa umgangatho kunye nefuthe lebrendi zilingana, inzuzo yexabiso kukhuphiswano.
Ngokukhula koluntu namhlanje, iintsuku apho yonke into ingaceli ncedo kwaye yenze yonke into ehlabathini sele iyinto yakudala. Ukubonelela abathengi ngezona nkonzo zinexabiso kunye nokoneliseka kwexabiso, siza kuseka umanyano lobuchule.
(10) Ukhuphiswano olunobuchule bezinto zokucoca ulwelo.
Kufuneka sibe nezinto ezintsha eziqhubekayo kuqala. Ngubani onokuqhubeka nokwenza eli qhinga kuqala, ngubani onokungenakoyiswa kolu khuphiswano lweemarike. Ke ngoko, ayisiyomxholo obalulekileyo kuphela wenkxaso yeshishini, kodwa ikwangumxholo obalulekileyo wokuphunyezwa kweshishini.
Olu khuphiswano lukhulu, lupheleleyo, lubonakaliswa njengoyena ndoqo wokhuphiswano lweshishini. Ukuhlalutya ngokwembono yesakhono sokudibanisa izixhobo ezihlanganisiweyo, ukusilela okanye ukuncitshiswa kwayo nayiphi na kwezi zinto zilishumi zokukhuphisana kuya kukhokelela ngokuthe ngqo ekunciphiseni kobu buchule, oko kukuthi, ukuncipha kokhuphiswano oluphambili lweshishini.